विनायकपुरमा एक्लै – Lok Raj Pathak
सर… चिया ….. !!!
ए त्यही राख….
मलाई ब्युँझाएर टेबलमा गिलास बिसाई ऊ फर्क्यो । मैले रेडियोको रिमोट दबाएँ । एकछिन पञ्चेबाजा बजाएर एउटा सुरिलो आवाज निस्क्योः “नमस्कार ! यो सामुदायिक रेडियो मदनपोखरा एफ.एम. १०६ थोप्लो ९ हो । बिहानी सेवामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं । आज मिति २०६३ साल जेठ आठ गते मंगलबार तदनुसार ……… ।”
‘ल हेर ! आज त मंगलवार पो रहेछ’, भन्दै म झट्पट् उठेर नित्यकर्म सकि तानसेन बजारलाई सुम्सुम्याउँदै शीतल पाटीबाट गणेश थानतर्फ सोझिएँ । पहिले सम्साझै निदाएजस्तो गर्ने फुच्चे बजार आजभोलि मध्यरातसम्म जागै र त्यसपछि पनि अर्धनिद्रामै हुनथालेकाले यतिबेरसम्म केही सटरहरु कराउँदै थिए अरु अझै स्थूल । आजकल त म पनि मस्तसँग स्लिपिङ् ब्यागभित्र पुरानो थकानको ऋण चुक्ता स्वरुप आरामको निद्रा पुरै प्रहर घुरेर आस्थाको काँध चढी बिनायक पुरमा छुचो बनेर पुण्य बटुल्न जादै थिएँ ।
बल्ल–बल्ल बुद्धि बङ्गारो पलाएको त्यही पनि किराले खाएछ । चौबीसै घण्टा दुःखेर हुर्मत लिएपछि मिसनमा एनेस्थेटिक्स लगाएर दुवै हातको बल लगाएर उक्काईदिए एउटा डेन्टिष्टले । नदुख्ने, नपाक्ने र भिटामिन एकैचोटी खाएको रियाक्सन भएर धन्नै मरिएन । उक्त एन्टिबायोटिक्सको धङ्धड्डी अझै अलि–अलि महसुस गरेको थिएँ । साथमा बुद्धि बङ्गारो गुमाउनु परेकोमा पीडाबोध हुँदै थियो । यति हुँदा–हुँदै पनि धार्मिक आस्था र उषाकालीन मनोरमासँगै मेरा उमङ्गका च्युलाहरु मनभरी चैत्रको लालुपातेझैं झाङ्गिएका थिए । म एक्लो थिएँ; न कोही पछ्याउँथ्यो न कसैलाई उछिन्नु पर्दथ्यो । साँघुरो बाटो भएर दम्साईलो गल्लीमा छिटो सास फेरिरहँदा फुच्चे आँगन र बुईगलहरुमा गुलाफ र भूँईचम्पाका फूलहरु, सर्वदा र मखमलीका विरुवाहरुले मन तान्दै थिए तर कुन्नि किन म भने आजभोलि केतुकी, राजवृक्ष, करविर र पैंयु मन पराउन थालेको छु ।
एसियाकै सबैभन्दा ठूलो ढोका र आकर्षक शीतलपाटी हुँदै म उकालिंदै थिएँ ।
म अहिले जहाँ छु त्यो नै मेरो देशका डाँडाहरु मध्येको सुरम्य टाकुरो हो । चिटिक्क मिलेर बनेका सबैभन्दा राम्रा बारी, पाखा र झुपडी सहितका वस्तीहरु होलान् यी । धपक्क बल्ने हिउँ–चुचुराहरु, गजधम्म बनेर अरठ्ठिएका थुम्किलाहरु र पूर्वपट्टि पुछारमा बिसाइरहेको विशाल माडी फाँट अनि त्यसैको दर्पणमा परावर्तित किरण ओढेर यतैतर्फ उकालिंदै गरेको विहानी बतासमा विचरण गर्ने भाग्यमानी मेरो मन एउटा यात्रीसँगै उकालिँदै थियो । घरी नीलो बनेर कलकल बग्ने, घरी हरियो बनेर प्रकृतिमा छटाउने अनि घरी शुभ्र पोशाकमा छाङ्गा छहराहरुबाट जिस्किंदै हामफाल्ने निराकारी पानी अहिले मेरो मुहार वरिपरि चिट्चिट् गर्दै थियो । सोचाई भने पर मेरो गाउँमा जिस्किंदै थियो । ती दिनहरुमा डाँडोमाथि बिसाउँदै गरेका सूर्य अनि उकालोको चौतारोमा बिसाउँदै गरेको भरिया र रुखका कापमा लुकेर बसेको गोलसिमल (धनेष चरो) लाई खोज्दै ज्ञान बटुलेर स्कूलबाट घर फर्किरहेको अतितको अबोध जस्तै महसुस पो गरेंछु म आफूलाई ।
त्यो बेला म अरुको काखमा अटाउँथे तर आज त के के भैसकिएछ । एउटा बिरुवा हुर्केर आकाश छुनु नराम्रो त हैन यति हुँदाहुँदै पनि यथार्थमा मान्छे जिन्दगीसँग हरेकपल लडिरहन्छ तर अन्त्यमा तेस्रो बस्तु मृत्युले जित्ने रहेछ । सायद त्यही अकाट्य मृत्युसँग मुकाबिला गर्न डराएर भगवान पुकार्छ होला मान्छे । के यस्तो वास्तविकतासँग डराएर चाकडी गर्नेलाई देउताले वरदान दिन्छन् त ? बुद्धिमान त त्यो हो जसले मानवीय यन्त्र प्रयोग गरेर जीवनको उच्चता खोज्न उत्कट बन्छ ।
उकालो सकेर तेर्सो सडकमा पुग्दा नपुग्दै मनभित्र दोहोरी चल्यो– ‘जाउँ कि नजाऊँ ।’ रोडमा उभिएर तानसेन बजारको प्राकृतिक पुस्तकका पानाहरु पल्टाउँदै गणेश मन्दिर जाने बाटोमा छापेका ढुंगाहरु छाम्न थालें । मसँगै अघि पछि गरेर केही जमातहरु सकेसम्म राम्रा पोशाकमा कतैतिर आफ्नो पाप बिसाउन वा त्यसबाट छुटकारा पाउन अघि बढ्दै थिए । आफ्नो चिन्तामुक्तिको लागि रचिएको भगवानलाई सबैले चढाउने पिरको बोझ झन् कति होला ! साँच्ची हामीभन्दा पनि बढि पीर त देउतालाई पो हुँदारहेछ । यसैले स्थूल मन्दिरमा बिसाएर अरु पाप गर्ने हैन बरु अब आफै निराकरणको बाटो खोजेर नराम्रा कृत्य गर्ने सोचको मार्ग द्वारमा नखुल्ने चाबी राख्नुपर्छ अनि मात्र भगवान हाम्रो दैलोमा आफै आउनेछन् । कुन्नि किन आज म आफैलाई अनौठो महसुस गरिरहेछु । सिंढी सकेर मन्दिर छिर्दै गर्दा पुनः मेरो तरङ्गमा अर्को विचार ठोक्किन पुग्यो, आँखाहरु राम्रा पोशाकतर्फ त्यो पनि विपरित लिङ्गीको । कुनै गुरुद्वारा, मठ–मन्दिर र मस्जिद जान आवश्यक छैन र गएपनि पिर चिन्ता लिएर किन जाने ? म जुनसुकै धर्म अवलम्बन गरुँ तर सर्वव्यापी भगवानको एकत्वले मलाई ज्ञान प्रेरणा र आन्तरिक उर्जा दिइरहन्छ । मेरो सामु एक नयाँ जीवन छ त्यसलाई आदर्शवान वा विकारी बनाउनु मेरो हातमा निहीत छ । यो सन्देश एक अमूर्त कलशजस्तो हुँदोरहेछ । जब म सेवा गर्न थाल्छु तबमात्र मेरो कर्मको बिमोचन हुन्छ । मेरो संघर्ष जीवन मुक्तिको लागि मात्र हुनुपर्छ अरुको लागि होइन । मैले थाहा पाउनुपर्छ कि मन्दिर धाएर मानवीय जीवनले मुक्तिको सास फेर्न कदापि सक्नेछैन । त्यहाँको त्यो सुगन्धमय वातावरण, पंक्तिमा प्रदर्शनको लागि बसेका आस्तिकहरुको पुछारमा नउभिएर म माथिपट्टिको हावामहलमा टुसुक्क बसें । सोचें, यो ब्रम्हाण्ड सबै पापीहरुको जमात हो क्यारे वा लोभीको पनि हुनसक्छ नि ! आफूलाई पनि अज्ञात पापबाट अछुतो राख्दै थिएँ म ।
हुन त म कहाँ गलत छु र मेरो सम्बन्ध कहाँनेर खराब छ त्यो मात्र मलाई थाहा हुने कुरा भयो । यदी म आफै सुध्रनु पर्छ भने आदरणीय भगवानलाई किन सुनाउने । सुनाएपछि मेरा समस्या समुल नष्ट पनि त हुँदैनन्… । कतै आत्मा साक्षी राखी भगवान भनाउँदो विश्वासको ढुङ्गोसँग वेदनाको पोको फुकाएपछि तिनीहरुले अबका दिनमा हृदयमा घात दिन सक्दैनन् होला । त्यसपछि मनमा प्राप्त शान्ति र आनन्दले मनस्थितिमा सकारात्मक संवेग प्रवाह गर्छ होला र सबैले आफू उर्जावान भएको महसुस गर्छ होला । मेरो लोभी मन भन्दै थियो : ‘जा पंक्तिमा बसिहाल…’ तर म त्यही टाँसिईरहें ।
अनिकालको पानी खर्च गरेर भएभरका गरगहनाहरुले सुन्दर अवयवहरुमा सास्ती थोपरेर आएका आधा आकाशको धावा बोल्नेहरु र लामा–लामा कपाल पालेर भएभरको सुगन्ध छर्केर यहाँ पर्खिनेहरु अध्ययन वा कुनै सिर्जनात्मक काममा अब छिट्टै नलाग्ने हो भने नवीन कुराको श्रीगणेश कसरी हुन्छ ? सिद्धी बिनायकले पनि कुन प्रमाणलाई आधार मानेर भक्त जनहरुलाई तथास्तु भन्लान खै ? म अलि परै बसें र सोचें “मात्रा बढी भयो भने जात्रा हुन्छ” । लौ न भगवान केही गर्नुपर्यो । श्रीगणेशलाई सबैले घेरेर राखेका थिए । निराकारी बिनायकले मेरो विनय सुन्लान् जस्तो ठानेर मनमनै पुकारें– “लौ भगवान यी चुहेको ढुङ्ग्रो लिएर अमिलो मोही थाप्न आउनेहरुलाई विचार गरेर कुम्लो भरिदिनुहोला।’
केही बेर त्यहाँ रहँदा २, ४ वटा नमस्तेको साथमा झण्डै एक दर्जनसँग ममतामयी हात मिसामिस् भयो । लड्डु खाने अवसर भने मिलेन । सबै भगवानको मन्दिरमा पूजै गर्न जान्छन् होला तर म भने सल्लाघारीको चिसो बतास, बेगमबेलीको सुवासना अनि प्रकृतिको छटा र बैंशालुहरुलाई सुटुक्क नियालेर बाहिरको त्रिशुल गाडेको मौलोबाट भगवानलाई पुलुक्क हेरेर एकछिन उभिएँ तर व्यस्त गणेशले अरुलाई नै हेरिरहे । झाल सुकेको काँक्रोको थाँक्रो जस्तो बनेर त्यहाँ रहिरहनु भन्दा आफू भित्रको पश्चाताप, ग्लानी, डर र त्रास कत्ति पनि त्यहाँ नफुकाई दाहिनेपट्टिको ओरालोमा चितुवा र हरिणको बच्चाको खेलमा भाग लिएँ । सायद २, ४ तोला सुन भिरेर विदेशी प्रशाधन प्रयोग गरि जान पाएको भए सबैले मलाई नै क्वारक्वार्ती हेर्थे होला । त्यस्तै मेसो मिले ‘ऊ’ पनि पर्न सक्थ्यो । त्यसपछि ५, ६ महिना इन्तु न चिन्तु हुन सकिन्थ्यो । त्यहाँ भन्दा बढी टिकेको ‘ऊ’ यो जमानामा असम्भव नै होला । धन्न, म त्यो प्रकृतिको वक्षस्थलमा प्राप्त हुन सक्ने ईश्वरीय अनुकम्पाबाट बचें । ओरालोमा मलाई आफ्नो हैसियतको पिर भन्दा पनि भावी समस्याको अहिल्यै निवारण भएको ढाडसले उर्जा थप्यो । त्यस पछि बुङ् सडकबाट हामफालेर सूर्यकुमार भाइको कोठामा छिरें ।
लेमन ग्रासको चिया, केही गफगाफ र परिवर्तनको बारेमा आ–आफ्ना अभिमत ओकलेर पत्रिकाको कार्यालयसम्म सँगै ओर्लियौं । सूर्यभाइ पत्रिका ईडिटिङ्को लागि व्यस्त हुनाले म पुनः एक्लिएँ । उनले मलाई पहिलेदेखि नै गणेश मन्दिरमा प्रदर्शन हुने गहना र राम्रा मान्छेहरुको बारेमा लेख्न कर गरिरहेका थिए । आज व्यस्त भइन्छ होला । भोलि काठमाण्डौ जानु छ, उताबाट फर्केपछि यी दृश्यहरुलाई शब्दचित्रमा थुन्नुपर्ला ।